PSJTV | ओली फेरिएका छन्, चीन भ्रमणमा कुनै आशा नगरे हुन्छ (भिडियो सहित)
ओली फेरिएका छन्, चीन भ्रमणमा कुनै आशा नगरे हुन्छ (भिडियो सहित)
बिहिबार, ३१ जेठ २०७५ पिएसजे टिभी
काठमाडौं । नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथि डा. प्रेमसिंह बस्न्यात कुटनीति सम्बन्धका बहुआयाम केलाएर विश्लेषण गर्नु हुन्छ । उत्तर र दक्षिणसँग बिगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध कसरी अगाडि बढेको थियो ? भन्ने विषयमा पनि पिएसजे टेलिभिजनसँग कुरा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाँडै नै चीन भ्रमणमा जाने विषय चर्चामा रहेको बेला हामीले डा. बस्न्यातसँग छोटो अन्तर्वार्ता गरेका छौं । अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको धारणाको सार संक्षेप निम्नानुसार छः
१९१२ मा थापाथली सन्धि भएपछिका दिनहरुमा हेर्ने हो भने हामी धेरै जसो समय दक्षिणतर्फ नै ढल्केका छौं । भारतमा ब्रिटिस राज हुँदा राणाहरु ब्रिटिससँगै नजिक थिए । २००७ सालपछि पनि दिल्लीतर्फ नै ढल्केको देखिन्छ । राजा महेन्द्रले चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाएर सन्तुलन मिलाउन खोजेको देखिन्छ । तर उनी पनि धेरै सफल हुन सकेनन् ।
अहिले पनि हाम्रो ढल्क्याई दक्षिणतर्फ नै छ । चीनतर्फ असाध्यै कम सम्बन्धमा छौं हामी । चीनसँग ठूला ठूला एमाओयु गरेर आउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । चीनले नेपालको विकासमा साझेदारी गर्न चाहन्छ । नेपालमा त्यो हुन दिइँदैन । भारतले अर्बौंको प्रोजेक्टहरु बनाइदिन्छु भन्छ, कहिले बनाउँदैन ।
यो परिवेशमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणबाट अबको दिनमा धेरै आशा गर्न सकिदैन । भारतको प्रधानमन्त्रीले चीनका राष्ट्रपतिसँग भेटेपछि विषय फरक रहेको अनुभूति भएको छ । भर्खरै ताइवानमा ठूलो सम्मेलन भयो । विभिन्न देशमा कार्यकारी प्रमुखहरु पुगे । त्यहाँ अमेरिका र पश्चिमाको आशा थियो कि मोदीले चीनविरोधी धारणा राख्लान् भन्ने अपेक्षा थियो । तर मोदीले त्यस्तो केही बोलेनन् । पश्चिमा अमेरिकी अहिले आश्चर्यचकित भएका छन् ।
यो कुरा म किन भनिरहेको छु भने, नाकाबन्दीको बेलाको केपी ओली अहिलेका होइनन् । भोट माग्ने केपी ओली होइनन् । यसकारण यो विषय हामीले बुझ्नु पर्छ ।
चीनले तिब्बत लिँदा भारत चुप बस्यो । भारतले कश्मिर लिँदा चीन मौन बस्यो । अर्थात आफ्नो मतलव पूरा हुने देखिँदा ठूला राष्ट्रहरु मौन बसिदिन्छन् । भारतले सिक्कीम निल्दा पनि चीन बोलेन । अब नेपालमाथि अत्याचार हुँदा पनि चीन बोल्दैन । अब त चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सुध्रेको जस्तो देखिन्छ । यसबाट पनि अलिकति डरमर्दो अवस्था आउन सक्छ ।
नेपाललाई भारतसँग बिलय गराउने त होइन, तर नेपालमाथिको नियन्त्रणबारे भारत र चीनबीच अलिखित समझदारी हुन सक्छ । किनभने चीन र भारतले छिमेकका साना मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ता खोस्दै, हडप्दै अगाडि बढेका छन् । इतिहास त्यही छ । तर यो हाम्रो देशलाई उनीहरु कतै पनि बिलय गर्न चाहँदैनन् । किनभने नेपालका कारण भारत चीनको सीमा सुरक्षाको खर्च जोगाइदिएको छ ।
भारतको बजार छाडेर चीनले नेपालसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्दैन । इन्धन खरिद सम्झौताको कुरा पनि त्यही हो । अघिल्लो पटक केपी ओलीले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने समझदारी गरेका थिए । तर सम्झौता गरेनन् । अब त्यो सम्झौता हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौता नहोस् भनेर भारतले पाइपलाइनको काम अगाडि बढाएको हो । चीनले रेल ल्याउला भनेर रेलको कुरा अगाडि बढाएको छ ।
मोदीले बुद्ध नेपामला जन्मेको भन्छन्, युरोप पुगेपछि भारतमा भन्न थाल्छन् । नेपाललाई भुटानकै स्टाटसमा राख्ने भारतको चाहना हो । फास्ट ट्रयाक नबनोस् भन्ने भारतको चाहना थियो । सेनाले विष्फोटक ल्याउन खोज्दा अहिले भारतले रोकिरहेको छ । सेनामाथि उसले नाकाबन्दी लगाइरहेको छ ।
अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन दैनिक १० वटासम्म उडान हुने, यसरी हुँदैछ तयारी
सेना व्यापारमा रमाउँदै, देशको सिमाना भने खुम्चिँदै
डा.शेरबहादुर पुन भन्छन् -मिडिया र जनताको आवाजले ममाथिको कारबाही रोकियो